Qatar Airways ayaa layaab ku reebtay rakaabkana xilligan Fasaxa ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways ayaa layaab ku reebtay rakaabkana xilligan Fasaxa ah
Qatar Airways ayaa ku faraxsan inay soo dhaweyso xilligan ciidda iyadoo la abuurayo daqiiqado gaar ah oo ka yaabin doona kana farxin doona rakaabkeenna saaran doonta iyo dhulka. Rakaabka ka dhoofaya ama tagaya Qatar Airways meelaha ay tagayaan ee Mareykanka, Yurub, Australia iyo New Zealand, iyo xulashada meelaha ay tagayaan Aasiya iyo Afrika, waxay ku raaxeysan doonaan dabaaldegyada shirkadda laga bilaabo 19ka Diseembar ilaa 26ka Diseembar.
Laga soo bilaabo marka rakaabka fasalka Ganacsigu ay soo degaan, waxaa lagu soo dhaweyn doonaa cabitaan xilliyeed soo dhawayn ah iyo kaar menu-ga si gaar ah loogu talagalay, oo ay ku jiraan noocyo kala duwan oo suxuun fasax ah oo ay ku jiraan sigaar cabbitaan salmon oo leh basbaas casaan leh, beetroot iyo ikura roe, Wellington hilibka lo'da oo leh baradho la shiiday, baradho macaan oo la dubay, bocor, likaha lo'da iyo hilibka lo'da, iyo qubbad shukulaatada basbaaska leh ee macmacaanka ah. Macaamiisha Premium sidoo kale waxaa loo soo bandhigi doonaa xusuusino xasilloon xilligan fasaxa ah, oo ay ku jiraan koox xafaayad xafladeed oo ku duuban baakadda wax lagu gooyo iyo shukulaato kulul oo kulul oo leh marshmallows. Rakaabku waxay ku madadaali karaan aruurinta ballaaran ee filimada damaashaadka ah ee nidaamka madadaalada ee Oryx One Inflight oo waxay ku raaxeysan karaan adeegga duulimaadka shirkadda markay tahay nasasho, iyagoo ku dhameystiraya raaxada dheeriga ah ee daabacaadda xaddidan ee daabacaadda 'Seasons Greetings' barkinta.
Qeybta Dhaqaalaha ayaa lagu lebisan doonaa daboolida madaxyada xafladaha iyo macaamiisha ku safraya Class Economy sidoo kale waxay ku raaxeysan doonaan liis xilliyeed farxad leh oo ay ku jiraan turkey chasseur, baradho shiidan oo leh dhir udub dhexaad u ah koorsada ugu weyn, iyo kirismaska ​​caleenta macmacaanka.
Qatar Airways waxay sidoo kale abuurtay taabasho damaashaad oo dhan Al Mourjan Business Lounge ee Hamad International Airport (HIA) markii ugu horeysay. Rakaabku way ku farxi karaan qurxinta xilliyeed ee ka muuqata qabanqaabada ubaxa, iyo bandhigyada hadiyad-sanduuqa ciidaha iyo damaashaadka noocyo kala duwan oo ah cuntooyinka fasaxa ee laga soo qaado buffet-ka ama laga xusho dijitaalka gaarka ah ee a la carte menu. Rakaabkaas doonaya inay soo jiitaan ruuxa xilliga, miis weyn oo wadaag ah oo leh qurxin qurux badan oo ay ka mid yihiin meelihii fasaxa loogu talo galay, rooga, rooga, iyo dharka lagu qurxiyo miiska ayaa isu keenaya dadka si ay u wadaagaan cunto ka mid ah xulashooyinka badan ay ku jiri karaan saladh waldorf, roulade turkey cufan, fayoobida hilibka lo'da, yule log, shukulaato kulul oo qurxoon leh marshmallows toasted, majaajillo saxeex iyo waxyaabo kale.
Madaxa fulinta ee shirkadda Qatar Airways Group, mudane Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Sannadkan wuxuu ahaa mid si aan caadi aheyn loo soo wajahay sababo la xiriira faafida joogtada ah. Taasi waa sababta sanadkaan aan u maalgelinayno dadaal dheeri ah sidii aan waligeen uga galnay hawlaheena xafladaha ee saaran markabka iyo HIA, si aan farxad ugu soo celino duulista. Toddobaadyada soo socda, tobanaan kun oo rakaab ah ayaa nala raaci doona fasax ama booqashada ehelka iyo asxaabta dibedda ujeedkeenuna waa inaan sii wadno mideynta qoysaska iyo asxaabta iyo inaan safarkooda ka dhigno mid la sii xusuusto xilligan gaarka ah. ”
Markaad la safreyso Qatar Airways inta lagu jiro xilliga ciida, rakaabku waxay filan karaan heerarka ugu sarreeya ee nabadgelyada inta ay ku guda jiraan safarkooda. Tallaabooyinka badqabka ee diyaaradda waxaa ka mid ah bixinta qalab ilaalin shaqsiyeed (PPE) oo loogu talagalay shaqaalaha qolka iyo xirmo difaac oo ammaan ah iyo gaashaammada wejiga la tuuro ee rakaabka. Rakaabka Heerka Ganacsiga ee diyaaradda ku qalabeysan ee loo yaqaan 'Qsuite' wuxuu ku raaxeysan karaa asturnaanta kor loo qaaday ee kursi abaalmarintan abaal-marinta ah ay bixiso, oo ay ku jiraan kala-duwanaanta qaanuunka arrimaha gaarka ah iyo ikhtiyaarka ah in la isticmaalo a 'Do not Disturb (DND)' indicator. Qsuite waxaa laga helaa duulimaadyada in ka badan 30 meelood oo ay ku jiraan Frankfurt, Kuala Lumpur, London iyo New York.